Allgedo.com » 2013 » February » 05
Home » Archive Daily February 5th, 2013
War Deg-Deg ah: Qarax Goor dhow ka dhacay Gudaha Magaalada Baydhabo.
Qarax xooggan ayaa gudaha magaalada Baydhabo lagula eegtay askar katirsan ciidamada Itoobiya xilli ay marayeen bartamaha magaalada gaar ahaan halka loo yaqaan afar-irdoodka. Qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan ayaa lala beegsaday ciidamo katirsan kuwa Itoobiya oo doonayay in ay ka dukaameystaan suuqa, waxaana uu khasaarooyin kasoo gaaray askartii qaraxa lala eegtay iyo dadka rayid ah. Ilaa iyo hada inta...
Maxkamada Gobolka Banaadir oo Xukuno ku ridey Wariye C/Casiis Koronto iyo Haweeneydii sheegtay in la Kufsadey.
Maxkamada Gobalka Banaadir ayaa maanta go’aan rasmi ah ka gaartay kiiska wariye C/casiis Cabdi Nuur Ibraahin iyo gabadha sheegtay in la kufsaday. Dooda oo saaka bilaabatay isla markaana goor dhaweyd soo gaba gaboowday ayaa waxaa wariye C/casiis iyo gabadha sheegtay in la kufsaday lagu xukumay min halsano oo xarig ah. Xaakimka Maxkmadda Axmed Adam ayaa ku dhawaaqey xukunka maxkmadd maanta, waxaana...
Maxkamad ku taala Dalka Yamen oo Xukuno ku ridey Burcad Badeed Soomaali ah.
Maxkamad ku taala magaalo xeebeedka koonfur bari dalkaasi ee Mukalla ayaa xukun ku riday gelinkii dambe ee shalay 16 ka mid ah kooxaha burcad badeeda Soomaalida. Xukunka 16-ka burcad badeeda ayaa la sheegay inuu yahay 10 sano oo xabsi,waxaana xukunka uu yimid kadib markii ay qirteen inay weeraro ka geysteen biyaha dalkaasi Yemen,sida ay qortay wakaalada wararka ee Saba ee dalka Yemen. Sidoo kale dhalinyaro...
Dowladda Ingiriiska oo 3 Milyan oo Pound ugu Deeqday Soomaaliya.
Lacagtaan ay dowladda Ingiriiska bixineyso oo guud ahaan gaaraysa 3 Milyan oo Pound-ka Ingiriiska ah ayaa waxaa 1.47 Milyan oo Pound la sheegay in lagu taageerayo dowlada cusub ee Soomaaliya iyo Baarlamaanka federaalka. Sidoo kale 1.5 Pound ayaa la sheegay in lagu caawin doono caruur gaarayso 60,000 iyo hooyooyinkooda iyadoo loogu iibin doono raashin iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. Dowlada Ingiriiska...
Dowlada Soomaaliya oo Maamul KMG ah u Magacawdey Gobolka Bay iyo Geeseey oo ka soo horjeestay Maamulkaasi
Dowladda Soomaaliya ayaa maamul KMG ah usameysay Gobalka Bay xilli dhawaanahan Wareegtadan oo ku taariiqeysneyd 4/02/2013 ayaa maamul KMG ah waxaa looga dhisay Gobalka Bay islamarkaana wuxuu shaqeyn doonaan maamulkaasi muddo lix bilood ah. Cabdi Aadan Hoosow, waxaa loo magacaabay Guddoomiyaha Gobalka Bay ee maamulka KMG ah Gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyada waxaa loo magacaabay Mustaf Ibraahim...
Taliska Ciidamada AMISOM ee Jubbooyinka oo ka Hadley Amaanka Magaalada Kismaayo.
Taliyaha ciidamada AMISOM ee Jubbooyinka oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose ayaa sheegay in ammaanka Magaalada Kismaayo uu yahay mid wanaagsan aysana ka jirin dhibaato dhanka ammaanka. Wuxuu sheegay in ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay xaqiijiyeen guud ahaan ammaanka Kismaayo mana jirin dhibaatooyin ammaan oo hada ka taagan Jubbooyinka sida...
Madaxweynaha Soomaaliya “Dastuurku marnaba ma dhihin 2 qabiil ayaa sameysan kara maamul goboleed” (Daawo Video)
Madax weynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay kulan ay si heer sare ah usoo qaban qaabisay Catham House oo horay loo oran jiray “Home of the Royal Institute of International Affairs”, ayaa waxuu uga hadlay siyaasadaha dowadda Soomaaliya ee ku wajahan nidaamka cusub ee ay Soomaaliya qaadatay oo ah DOWLAD WADAAGGA ama “FEDERAL GOVERNMENT.” Hay’addaan...
David Cameron oo Aqalka 10 Downing Street ee looga taliyo Britain ku qaabiley Madaxweynaha Soomaaliya
Wasiirka kowaad ee dalka Britain David Cameron ayaa aqalka 10 Downing Street ee looga taliyo Britain ku qaabiley Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud. Labada masuul ayaa muddo kooban ka sheekaystey xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Britain kadib isbdeladii u danbeeyey, iyo sidii dalka Britian gacan uga geysan lahaa taageerada dowladda Soomaaliya ee uu Madaxweynaha...